Cunto loogu talagalay Cake "Malinka"
Daboolka guriga Cunnooyinka Cashada Keega
Cake laga bilaabo jelly Cuntadani for this cake I ka amaahda laga soo xirmooyinka of diirada jelly. Cajiinka, kaas oo kaasi oo laga sameeyay cake this, oo leh cadeynaya cunnooyinka cuntada, taas oo ku jirta diirada acid, wuxuu leeyahay midab casaan leh. Haddii, marka lagu daro, in la doorto kareem ku habboon, ka dibna dubista noocan oo kale ah waxay noqon kartaa mid sharraxaad ah xafladda. Diyaarso keega maaha mid adag mana qaadanayo waqti badan. Hada waxa uu ku jiraa bangiga aan lafaha lahayn. Waxaad samaysan kartaa miro yar oo keega leh jelly midabyo kala duwan. Gaar ahaan waxay waxtar u leedahay kiwi, raspberries (strawberries) iyo orange.
Burka daqiiqda 3 tbsp. l.
Ukuntu digaag 3 rodol.
Muuqaalka khalka 1 tbsp. l.
Kissel qalalan Qalalaasaha 250 g
Bose 70 g
Sare raspberry ah 150 g
Foosto sonkor leh 50 g
Dhaliil raspberry 300 g
Talaabada 1aad Si aad u samayso buskud, qaado qoyaanka jelly qalalan (tusaale ahaan, "Malina"), ukunta digaaga, bur burin, suuf iyo baking soda.
Tallaabada 2 Qaybso borotiinka ka soo goosadka.
Talaabada 3-aad Xididdo xayawaanka xayawaanka ah.
Tallaabada 4aad Rush jelly ilaa ay ka dabacsan tahay oo ay ka kacdo shaandho.
Tallaabada 5 Ku xidh baakadaha leh diirada.
Talaabada 6aad Qaadashada si fiican.
Talaabada 7 Isku darka ku dar bur, soodhada, oo la bakhtiiyey khal, iyo dusha cadcad.
Tallaabada 8 Si taxadar leh u cajiinka cajiinka ilaa dharka laf dhabarta ka soo hooseeya.
Tallaabada 9 Qaadi cajiinka ku jira shuban, saliid iyo rusheeyeen bur.
Tallaabada 10 Ku rid foornada foornada, ku shub ilaa 180 ° C, dub oo qiyaastii 30-40 daqiiqo (ilaa ciyaarta qalalan).
Tallaabada 11 Qaado miraayada la dhamaystiray ee loo yaqaan 'grilled pasta', u ogolow inay qaboojiso, ku daboolato weel qoto dheer oo qallalan oo baxo 7-8 saacadood. Tincture this ka dib, cake ma qalloocin marka goynta.
Tallaabada 12aad Mashiinka fiiqan, googo gogol u dhig laba xabbo oo dhumuc isku mid ah.
Talaabada 13 Qeybta hoose ku rid qaybta hoose ee cake. Haddii mustaqbalka lagama maarmaan noqoto in lakabka fidiyo lakabka qaro weyn ee kareemka ama soufflé, ka dibna waxa fiican in la isticmaalo boodhka qaro weyn sida dabka. Laga soo bilaabo waxay sameeyaan foorar dheer, gali dhowr lakab oo ku duub cidhifyada lakabka, iyada oo kor u qaadeysa iyada oo loo marayo qaab khafiif ah. Giraankani si fiican ayuu u ilaaliyaa lakabka kareemka.
Tallaabada 14 Si aad u diyaariso kareemka aad u baahan tahay inaad qaadato kareecada dufanka 32%, sonkorta budada ah, macaanka raspberry iyo gelatin.
Talaabada 15-aad ee Gelatin-ku qoyso qadar yar oo biyo qabow ah 30 daqiiqo.
Tallaabada 16 Ku rid weelka gelatine ee biyaha qubeyska oo kala gooyo, iska ilaali karkarinta.
Tallaabada 17 Ku rid macaanka ee gelatin.
Tallaabada 18 U daadi walaaqka ilaa inta u dhaxeysa oo u qabow 30 ° C.
Tallaabada 19 Cuntada xaraaradda xumbada.
Tallaabo 20 Ku rid kareemka qaboojiyaha leh jelatin.
Tallaabada 21 Si tartiib ah u kari kariimka ilaa iyo inta suunka ah.
Tallaabada 22 Lakabka diyaarsan ee laftirka waraaqaha ayaa ku rid kariimka iyo heerka. Buufaan ayaa lagu meeleeyaa qaboojiyaha ilaa 3 saacadood si loo xoojiyo kareemka kareemka.
Tallaabo 23 Maraq la qaboojiyey oo lakabiyey lakabka khafiifka ah ee macaanka si loogu dhejiyo lakabka sare ee lakabka sare.
Tallaabada 24 Dhir ah, ku rid daaha sare ee keega oo riix.
Tallaabada 25 Ka qaad faashadda molding ka soo cake.
Tallaabada 26 Boka iyo daboolka sare ee keega leh macaanka.
Tallaabada 27 Dajinta keega leh cambar iskood ah oo la jarjarey oo la kariyey iyo qurxinta dusha sare ee buskudka.
Cake "Muraayad jaban"
Cake Orange Crispy Cake
Cunto-dhadhan: Delicious Cake Anny Berry loogu talagalay miiska sannadka cusub
Keega macadamia nuts iyo sharoobada
Cuntadani oo ah cake leh kalluun, manjo dhakhso ah miiska sanadka cusub
Cake for March 8, hooyadu leedahay gacmo - raashin wanaagsan oo leh sawiro. Cake Beautiful "Queen" ka filimka "March 8" oo leh kareem iyo ubax ka soo laalaada
Sifooyinka ugu muhiimsan ee haweenka ku fiican
Sida loo sameeyo qurxiyo qurux badan sanadka cusub ee sawir qaadashada: 4 xeerarka ugu muhiimsan!
Kalluun la dubay oo leh Pumpkin
Dumarkee noocee ah ayay nimanku door bidaan?
Astaamaha iyo nafaqada habboon ee arthritis
Hilib geedka oo dhan
Ku saabsan dumarka ayaa guursaday
Sida loo la kulmo iyo sida loo xajiyo sanadka faras?
Home Spa - cuntooyin kala duwan
Sidee loogu dhejiyaa dharka lagu qurxiyo guriga?
Faalooyinka wajiga leh saliid saliid ah guriga
Sidee loo fasaxaa fasax firfircoon ee Moscow?
Dhacdooyinka moodada ee koofiyadaha. Xilliga: Dayrta-Jiilaalka 2012-2013
Maalmo wanaagsan oo loogu talagalay uurka
Go'aami qaabka maamulaha, waxa kugu sugaya shirkadda
Seexo biyo wasakh ah
3 puzzles, kuwaas oo lagu xalliyo kaliya dadka aqoonta sare leh. Sirdoonkaagu heerkee?
Sameynta iyo timaha timaha dugsiga maalin kasta